ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တစ်ပါတ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့နောက် ဝေဖန်မှုတွေ အထူး ခံနေခဲ့ရတဲ့ အလန်ရှီးယား - SPORTS MYANMAR
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တစ်ပါတ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့နောက် ဝေဖန်မှုတွေ အထူး ခံနေခဲ့ရတဲ့ အလန်ရှီးယား
နယူကာဆယ် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဖြစ်တဲ့ အလန်ရှီးယား ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် တစ် အတွက် တစ်ပါတ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းကို ရွေးချယ် ပေးခဲ့ရာမှာ ချဲလ်ဆီး အသင်း မှ ကစားသမား တွေ မပါဝင်ခဲ့ ကြတဲ့ အတွက် ဝေဖန်မှု တွေကို ခံနေ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဖရန့် လမ်းပတ် ဦးဆောင် ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ ပွဲစဉ် 1 မှာ ဘရိုက်တန် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့ ရပြီး3– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှာ ချဲလ်ဆီး အတွက် သွင်းဂိုး တွေကို ဂျော်ဂျင်ဟို ၊ ကော့ထ် ဇူးမား နဲ့ ရိစ် ဂျိမ်းစ် တို့က သွင်းယူ ပေးခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ချဲလ်ဆီး အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ် ဖြစ်လာတဲ့ တီမို ဝါနာ ကလည်း ပုံစံကောင်း တွေကို ပြသ ထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလန်ရှီးယား ရဲ့ တစ်ပါတ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းထဲ မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ကစားသမား တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မပါဝင် ခဲ့ကြ ပါဘူး ။
အလန်ရှီးယားဟာ ဂိုးပေါက် ကာကွယ်ရေး နေရာ အတွက်တော့ ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်း အတွက် လက်စွမ်းကောင်းပြ Clean Sheet ရယူ ပေးခဲ့တဲ့ ဗီဆန်တီ ဂွိုက်တာ ကို ရွေးချယ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ခံစစ် အတွက် လက်စတာ စီးတီး အသင်းမှ တီမိုသီ ကတ်စ်တက်ဂ်နီ ကို ရွေးချယ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ ကစားသမားသစ် ဖြစ်တဲ့ ဂါဘရီယယ် မာဂယ်လ်ဟေး ၊ ဝုလ်ဗ် အသင်း မှ ရိုမိန်း ဆိုက်စ် နဲ့ အဲဗာတန် အသင်း မှ လူးကပ်စ် ဒစ်ဂ်နေး တို့ကို ခံစစ် လေးဦး နေရာ အတွက် ရွေးချယ် ပေးသွား ခဲ့လိုက်ပြီး ချဲလ်ဆီး ခံစစ် တွေကို ချန်လှပ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ကွင်းလယ် နေရာ အတွက် နယူးကာဆယ် အသင်း မှ ဂျပ်ဖ် ဟမ်းဒရစ် ၊ အဲဗာတန် အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမားးသစ် အလန် နဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ ကစားသမား သစ် ဖြစ်လာသူ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့်ဟောင်း ဝီလီယံ တို့ကို ရွေးချယ် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် သုံးယောက်တန်း တိုက်စစ် နေရာအတွက် လီဗာပူးရဲ့ ဟတ်ထရစ်ရှင် မိုဟာမက် ဆာလာ ၊ လက်စတာ အတွက် နှစ်ဂိုး သွင်းခဲ့တဲ့ ဂျေမီ ဗာဒီ နဲ့ ကလမ် ဝီလ်ဆင် တို့ကို ရွေးချယ် သွားခဲ့ လိုက်ပြီး တစ်ပါတ်တာ အကောင်းဆုံး မန်နေဂျာ ဆု အတွက် အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ ကို ရွေးချယ် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် အဆိုပါ ရွေးချယ်မှု ထွက်ပေါ် လာခဲ့တဲ့နောက် ချဲလ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ပရိသတ် တွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ကစားသမားတွေ မပါဝင် ခဲ့တဲ့ အတွက် လူမှု ကွန်ယက် အထက်မှာ ပေါက်ကွဲ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အသင်း အတွက် စပါယ်ရှယ် ကစားသမားး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရိစ် ဂျိမ်းစ် မပါဝင် ခဲ့တဲ့ အပေါ် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဝေဖန် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
” အဲ့တာဆို ရိစ် ဂျိမ်းစ်က ဘောလုံး ကစားတဲ့ ကစားသမား မဟုတ် တော့ဘူးလား ? ”
” ဒါက ချဲလ်ဆီး ကို မုန်းတီး နေသလို ပါပဲ ။ ရှီးယား ချဲလ်ဆီးကို မုန်းတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် ကျိန်ပြောရဲ ပါတယ် ။ ဂျိမ်းစ် က ရပ်ဘီ ကစားတဲ့ကောင်လား ? ”
” သတင်း သုံးသပ်သူ တွေနဲ့ ဒိုင်တွေက ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီလို ချည်းပဲ ။ ငါတို့ မအံ့သြတော့ ပါဘူး ။ ကတ်စ်တက်ဂ်နီ က ဂျိမ်းစ်ကို ကျော်ပြီး အရွေးခံရတယ်လား ? ”
” ဂျိမ်းစ် က အလန်းစား သွင်းဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ပြီး တစ်ဂိုးလည်း ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့တယ် ။ အကယ်လို့ အာနိုးသာ ဒီလို လုပ်ပြခဲ့ရင် ရှီးယားဟာ သေချာပေါက် ရွေးမှာပဲ ” လို့ ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် တွေက အသီးသီး ဝေဖန် ထိုးနှက် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။